राप्रपा अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङदेन विजयी, कसको कति मत ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
राप्रपा अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङदेन विजयी, कसको कति मत ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेन विजयी हुनुभएको छ । आज बिहान सम्पन्न मतपरिणामबाट थापालाई २ सय मतले हराउँदै लिङ्देन विजयी हुनुभएको हो । लिङदेनले १८१७ मत ल्याउँदा कमल थापाले १६ सय १७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । लिङदेन राप्रपाबाट निर्वाचित एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।
मतगणनामा ४३१ मत बदर भएको छ । राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हिजो मतदान भएको थियो भने आज रातभर मतगणना भएको थियो ।
राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन विजयी भएसँगै प्रत्यासी कमल थापाले हार स्वकार्दै लिङ्देनलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात गर्दै राप्रपा अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा भएको पराजय सहर्ष स्वीकार गर्दछु।नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई बधाई तथा शुभकामना’, थापाले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।
थापाले प्रतिकुल परिस्थितिमा समेत आफूमाथि विश्वास र भरोसा गर्ने पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तामाथि आभार प्रकट समेत गरेका छन् । उनले पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भत्सर्ना गर्दछु।’ उनले त्यसका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई व्यङ्ग्य गर्दै धन्यवाद भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले राहत र उन्मुक्ति पाएको छु।
सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला शिरमा कफन बाँधेर २०६३ साल देखि राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाईयो। सो एजेण्डाको मुल संवाहकलाई राजनीतिकरुपमा समाप्त पार्न गरिएको चेष्टाले राजाको भलो होस्।
यस्ताे छ अन्तिम मतपरिणाम
रेखा थापालाई पराजित गर्दै शाही महामन्त्रीमा निर्वाचित
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महामन्त्रीमा महिलातर्फ कुन्तीकुमारी शाही रेखा थापालाई पराजित गरेकी छन् । कुन्ती २००८ मत ल्याउँदै विजयी भएकी हुन् भने रेखाले १६४० भोट ल्याएकी छन् ।
कुन्ती अध्यक्ष कमल थापा प्यानलबाट र नायिकासमेत रहेकी थापा लिङ्देन प्यानलबाट चुनाव लडेकी थिइन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनोट भएको छ । पार्टीमा अध्यक्ष र पदाधिकारीसहित १४९ केन्द्रीय सदस्यको लागि चुनाव भएको थियो ।
अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनले जित हासिल गर्दा पदाधिकारीतर्फ भने कमल थापा पक्षधरहरु धेरै निर्वाचित भएका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा मिश्रित परिणाम आएको छ ।
पुरुष तथा महिला केन्द्रीय सदस्यको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ५७ जना निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुमध्ये डा. राजेश गिरीलाई सबैभन्दा लोकप्रिय मत प्राप्त भएको छ । उनले २२५८ भोट ल्याएका छन् ।
परिणाम अनुसार मुस्लिम खुल्ला केन्द्रीय सदस्यतर्फ मदिना खातुन, ताहिर अलि र अन्जरा आलम निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी भोट मदिना खातुनले ल्याएकी छन् । उनले १७५४ भोट ल्याएकी छन् ।
महिला खुल्लातर्फ ४७ जना निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी भोट कुन्तीदेवी पोखरेल आशा लामा र पवित्रा गिरीलाई प्राप्त भएको छ । कुतीले २०८० भोट प्राप्त गरेकी छन् ।
मधेसी खुल्लातर्फ ११ जना निर्वाचित भएकोमा ११ जना निर्वाचित भएकोमा मोहनप्रसाद यादवलाई सर्वाधिक १९५२ भोट प्राप्त भएको छ ।
आदिवासी जनजाति खुल्लातर्फ १४ जना निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी भोट आङनीमा शर्पालाई प्राप्त भएको छ । उनले २०२५ भोट ल्याएकी छन् ।
खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा कमल थापाका भाइ गणेश थापा र उनका छाेरा अभिशेक थापा विजयी भएका छन् । कमल थापाकी छाेरी प्रतिष्ठा थापाले पनि महिला केन्द्रीय सदस्यमा विजय हासिल गरेकी छन् ।